Raiisel wasaaraha Thailand wuxuu bartilmaameedsanayaa inuu albaabada u furo dalka 4 bilood gudahood | Wararka safarka Thailand
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka safarka ee Thailand » Raiisel wasaaraha Thailand wuxuu bartilmaameedsanayaa inuu albaabada u furo dalka 4 bilood gudahood
Wararka Safarka Ganacsiga • Arimaha Dowlada • Warka Warshadaha Martigelinta • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Booqashada Caalamiga ah • Fursadaha maalgashi • kale • dib u dhiska safarka • Ammaanka • Wararka safarka ee Thailand • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka
Raiisel wasaaraha Thailand wuxuu bartilmaameedsanayaa inuu albaabada u furo dalka 4 bilood gudahood
Khudbad uu dhawaan ujeediyey wadanka Thailand oo uu kajeediyey raiisel wasaare General Prayut Chan-o-cha oo uu kahadley TV pool, Raiiselwasaaraha waxa uu sheegey in dowlada ay ka go’an tahay in wadanka dib loofuro 120 maalmood kadib.
Gobollada waaweyn ee dalxiiska ee dalka ayaa si tartiib tartiib ah dib loogu furayaa maadaama ay diyaar yihiin.
Raiisel wasaare Prayut wuxuu sheegay in Phuket, oo ololaheeda Phuket Sandbox ah, ay u adeegi doonto sidii mashruuc tijaabo ah oo loogu talagalay hindisaha dib u furista qaran.
Ra'iisul wasaaruhu wuxuu qirey halista la xiriirta go'aankan weyn laakiin wuxuu ku celceliyey in dowladdu ay mudnaanta siineyso samaqabka dadka iyo in qaranku ku filan yahay cimiladaas.
General Prayut wuxuu kaloo sheegay in si loo awoodo in dalka la furo 120 maalmood gudahood, ay dowladdu sameyn doonto wax walba oo macquul ah si loo hubiyo in tallaalada lagu bixiyo sida ku xusan jadwalka ballanqaadka. Sida laga soo xigtay RW, muddada dhow, mudnaanta koowaad ee siyaasadda ayaa ah in qof walba uu helo, ugu yaraan, tallaalkiisii ​​ugu horreeyay ee tallaal sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, maxaa yeelay tallaalka ugu horreeya durba wuxuu aad u kordhiyaa awoodda jirka ee la qabsiga cudurka iyo badbaadin kara nolosha qofka. Waqtiga fog, maamulku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu tallaalo muwaaddiniintiisa sida loo dalbado, maadaama Thailand ay awood u leedahay inay soo saarto tallaallo gudaha ah.
Warka ka imanaya Pattaya, Duqa magaalada Sonthaya Kunplome ayaa sheegay 16-kii Juun in magaaladu ay ballansatay qiyaaso BBIBP-CorV ah oo ay soo saareen Kooxda Qaranka ee Dawooyinka ee Shiinaha, taas oo badanaa loo yaqaan Sinopharm. Magaalada ayaa amartay 100,000 oo qiyaas oo tallaalka ah oo lagu kharash gareynayo 8.8 milyan baht (US $ 280,166) oo ay meel dhigtay loogu talagalay COVID-19 jabsasho. Sonthaya ma aysan shaacinin goorta la keenayo talaalka Sinopharm laakiin waxay sheegtay in magaalada ay dhawaan furi doonto diiwaan galinta qiyaasaha qadka iyo foomka diiwaangelinta oo ay saraakiisha magaalada u qeybin doonaan bulshada.
Qiyaasta ayaa laga iibsanayaa qiimaha tafaariiqda ee 888 baht (US $ 28.28) oo laga keenay Chulabhorn Royal Academy, oo u guurtay inay la soo gasho 1 milyan oo daawo Sinopharm ah iyadoo dhaleeceyn loo jeedinayo dowladda la doortay ee ku fashilantay inay soo saarto tallaallo ku filan. Akadamiyadda Royal ee Chulabhorn waxay ku qiimeysay tallaalka Sinopharm 888 baht halkii xabo oo laga mamnuucay iibsadayaasha inay u gudbiyaan kharashka kuwa qaata tallaalka. Qiimuhu wuxuu daboolayaa kharashka tallaalka, gaadiidkiisa iyo caymiska dhibaatooyinka soo raaca.
Pattaya wuxuu ubaahanyahay inuu talaalo 120,000 oo qof aaga weyn ee Pattaya, 80,000 oo kamid ah kuwa ka weyn 19 sano, oo ay kujiraan dadka waayeelka ah. Dowlada Pattaya iyo hogaamiyaasha ganacsatada ayaa si aad ah ugu baahnaa talaalka ugu yaraan boqolkiiba 70 dadka deegaanka si dib loogu furo magaalada dalxiis shisheeye. Si kastaba ha noqotee, dowladdu waxay mudnaanta siisay aagga caasimadda ee Bangkok, iyadoo ka tagtay Chonburi qoondeyn yar oo qiyaaso ah oo ay sameeyeen Sinovac Biotech iyo AstraZeneca PLC.